Izindaba - mayelana ne-ICF (ithempulethi kakhonkolo efakiwe)
I-ICF, i-Insulated Form Concrete, eChina abantu bayibiza nangokuthi i-module ye-EPS efakwe noma amabhlogo we-EPS. Yenziwe ngumshini wokubumba we-EPS nesikhunta se-ICF. Lolu hlobo lwemojuli ye-EPS lusebenza kahle kakhulu ekuvaleni ukushisa nasekuhlukaniseni umsindo. Kuhlolwe ukuthi ukongiwa kwamandla kwezakhiwo ezenziwe ngamabhulokhi e-ICF kungafinyelela kuma-65%. Amabhulokhi e-EPS ICF awahlinzeki nje kuphela ngendlela ephumelelayo yokwakha ukufakwa kodonga lwangaphandle ezindaweni ezibandayo, kepha futhi ixazulula izinkinga zokwakha njengokuxebuka kobuso bokunamathela kodonga lwangaphandle, nesikhathi eside sokwakha. Ukwakhiwa kwemodyuli ye-ICF kulula futhi kuyashesha, ukuxhumeka kolimi ne-groove phakathi kwamamojula kwenza uxhumano lube lukhulu kakhulu. Ama-dovetail grooves kwimodyuli ye-ICF anika amandla udaka lwe-plaster ngokunamathela kumamojula we-EPS.
Amamojula we-EPS ICF manje angumkhiqizo othandwa kakhulu emkhakheni wethu wokwakha.
Uma kuqhathaniswa nezitini zobumba zendabuko, izinzuzo zalo yilezi:
1.Gcina imali: Abantu bacabanga ukuthi amamojula wokonga amandla we-EPS abiza kakhulu kunezitini zobumba ezejwayelekile. Eqinisweni, isisindo sodonga lwemojuli ye-EPS silula, esinganciphisa izindleko eziyisisekelo, sandise indawo esetshenziswayo, songe amandla omuntu, londoloze izinto zokwakha, futhi izindleko zizonke zingcono kunokusebenzisa izitini zobumba.
Isikhathi se-2.Save: ukwakhiwa kwendlu kuyashesha. Abantu abangu-6 bangaqedela ukwakhiwa okuyinhloko kwendlu eyisikwele eyi-150 (kufaka phakathi ukhonkolo wophahla) kungakapheli izinsuku eziyi-7, bese benza umhlobiso. Sonke isikhathi sokwakha asidluli izinyanga ezi-3.
Ukonga i-3.Labor: isakhiwo esilula kanye namandla aphansi emisebenzi. Ngisho namakhosikazi ejwayelekile emakhaya angazakha izindlu kalula njengamabhulokhi wokwakha ngaphansi kokuholwa ngabasebenzi abangochwepheshe.
Ukonga okwehliswayo nokuncishiswa komoya: ukusebenza okuhle kokushisa okushisayo, kufudumele ebusika futhi kupholile ehlobo. ENyakatho yeChina, ngenxa yezinga lokushisa eliphansi ebusika, uhlelo lokushisa luhlala lusetshenziswa ezindlini zonke. Imodyuli eyakhiwe ye-ICF isiza ekwehliseni amakota amathathu amalahle okushisa ezindaweni zasemakhaya, kunciphisa ngempumelelo ukusetshenziswa kwamalahle nentuthu nothuli.
Isakhiwo 5.Strong nokuzamazama komhlaba okuqinile. Ngemuva kokusebenzisa amabhlogo e-EPS ICF ekwakhiweni, isakhiwo sezitini esijwayelekile siguqulwe saba isakhiwo sokhonkolo esiqinisiwe ngaphandle kwezindleko ezandayo, futhi amandla okuzamazama komhlaba enyuswe amahlandla ayi-7. Ngokuya kokuhlolwa kwe-Earthquake Testing Center, lapho ubukhulu bungaphezu kwama-degree ayi-8, ukuguqulwa kwesakhiwo akunangozi, futhi lapho amandla engaphansi kwama-degree ayi-8, umzimba omkhulu wesakhiwo awulimalanga.
Ngenxa yalokhu okungenhla, imodyuli eyakhiwe ye-ICF ikwenza ungakhathazeki. Imodyuli yokwakha ye-EPS ICF yephula imodeli yokwakha yendabuko futhi ifinyelela inhloso yokwakha okuluhlaza nokuphila okuluhlaza, yithi, ukukhishwa kwekhabhoni ephansi, ukonga amandla nokufakwa okushisayo, ukuvikelwa kwemvelo nokuqina, nokusebenza okuphezulu kokuzamazama komhlaba. Kuyisinqumo esihle lapho wenza izakhiwo ezintsha.